Hulu waxay ku garaacday Netflix aag laga yaabo inay kugu yaabto - BGR - WAA KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » madadaalo Hulu waxay ku garaacday Netflix duurka laga yaabo inay kugula yaabaan - BGR
Netflix waxay leedahay tobanaan malaayiin macaamiil ah oo kale, xarun adeegsi caalami ah, taxane TV aad u qiima badan, iyo barnaamijyo TV-ga ka xiiso badan kana badan Hulu. Hadana, kooxda aadka u yar ee Netflix ayaa ku garaacaysa baahinta baahinta aag muhiim ah, marka loo eego xogta cusub, gaar ahaan salka ku haysa adeeggeeda, Netflix ama Hulu, waxay siisaa tiro badan oo telefishan tayo sare leh dhacday istuudiyaha. ] Ku guuleystaha, sida ku xusan xogta cusub ee ay soo aruurisay mashiinka raadinta si joogto ah Reelgood yaabin kartaa.
Reelgood wuxuu go'aansaday inuu xisaabiyo tirada taxanaha hadda loo qoondeeyay qulqulka qulqulka leh dhibco ka weyn ama u dhigma 8.0. dhanka IMDb. Tani waa mitirka loo isticmaalo go'aaminta haddii taxanaha telefishanka "tayo sare" leeyahay.
Kooxda Reelgood waxay falanqeeyeen lambarada Hulu iyo Netflix, iyo sidoo kale Amazon. HBO iyo Showtime sidoo kale waa qayb ka mid ah kooxda.
Halkan, sida lagu sheegay warbixinta Insider Ganacsiga Halkan waxaa ah sida mid kasta oo ka mid ah shanta ilaha loo soo bandhigo, marka la eego tirada taxanaha leh IMDb 8.0 ama soocitaan sare:
Fiidiyowga Prime Minister: 142
Xilliga Bandhigga: 12
Sida aad arki karto, Hulu waa guuleystaha ugu weyn ee salka ku haya tayada, oo ay ku xigto Netflix. Haddii aad iska indhatirto tayada daqiiqad, inkasta oo, iyo tiradu ay tahay waxa ugu weyn ee aad ka welwelsan tahay goorta aad go aansaneyso adeegga aad iska qori karto, sifiican, waxay xoogaa dib u dhigeysaa darajada sare.
Iyada oo ku saleysan tirada, gacanta war baahinta Amazon ayaa runtii guuleysata. , oo leh waxoogaa muujinaya 2 317 maktabadiisa TV, marka la barbar dhigo 1 966 ee Netflix iyo 1 931 ee Hulu, marka loo eego xogta Reelgood.
Hal shay ayaa maareynaya inay ahaato mid run ah, inaad diiradda saareyso tirada iyo tayada, hase yeeshe, waa xaqiiqda ah in Hulu iyo Netflix ay yihiin kuwo si dhow ula tartamaya ganacsiga TV-ga. Labada qaybood ee aan kor ku soo sheegnay, Netflix wuxuu Hulu u kala saaraa ku saleysan tirade, halka Hulu ay ku guuleysato iyada oo ku saleysan tayada - ama ugu yaraan tayo ahaan goorta go'aamiyaha uu yahay dhibcaha IMDb.
Isha Sawirka: Sawirka waxaa iska leh Dan Goodman / AP / Shutterstock